Zvitsva muBhodhi Game Circus: Kutamba mubindu, muSweden, Japan uye mugiredhi grove - Spielpunkt - mitambo yebhodhi nemitambo yemavhidhiyo.
Yakatumirwa ne Jonas Dammen | May 3, 2022 | Mitambo yebhodhi nemakadhi, nhau
Mubhodhi Game Circus unogona kutarisira kune gore rizere nehunyanzvi. Iyo Maple Valley Mhuka inoenderera mberi nekutasva bhiza rayo rekubudirira uye ichiri nhanho muPamusoro makumi mashanu eBoardGameGeek's "Hotness". Ehe, icho hachisi chikonzero chekuzorora, kunyangwe kana chinyowani chichikukoka iwe kutora kuzorora zvishoma nzira yeSweden. Mukuenderera mberi kwegore, imba yekudhinda inopa zvakasiyana-siyana zvezvigadzirwa zvitsva.
Das pano watounzwa mutambo Kutonga kwakavanzika yasvika. Gadziriro dzekupedzisira dzekutumira kune vanotsigira mushandirapamwe wevanhu vazhinji dziri kuitwa uye ma-pre-odha ari kugadzirirawo kutumirwa.
Makoroni maduku, bindu guru - makwikwi mubindu
Kazhinji sekisi iri mubindu. Heino ndiyo imwe nzira yakatenderedza uye mucircus munouya gadheni. Mutambo wemhuri weupscale ndewekupera kwezhizha Makoroni madiki, bindu guru zvakaziviswa. Mutambo une mifananidzo yakanaka wakanangana nevatambi vane ruzivo rwekutamba vanofarira hukama hwakaoma. “Gadheni” riri mungozi Hongu! muDortmund uye kuBerlinCon. Zuva rekusunungurwa iri Pano, vatambi vanotora chikamu cheimwe yemarudzi mana uye vanoedza kuwana nzvimbo yepamusoro munzvimbo dzebindu.
Muchikamu chekutanga chedenderedzwa rine zvikamu zvitatu, vatambi vanoita zviito zvavo. Nenzira iyi, zvivako zvitsva zvinogona kutangwa kana kuti hutsva hutsva hunogona kuwedzerwa kune zvivako zviripo. Ose ari maviri "anobhadharwa" nevagari. Zvivakwa zvakavakwa zvinogonawo kuputswa, inova ndiyo yekupedzisira inogoneka kuita mukutendeuka. Chinhu chakakosha ndechekuti munhu ane chijana chake anosarudza kupi uye ndiani achaita chiito chinotevera. Wobva watarisa kuti ndiani ane pasi zhinji muzvivakwa zvavo mune imwe neimwe yenzvimbo nomwe. Munhu ane uriri hwakawanda anowana vagari vaviri semubairo. Ichokwadi kune motto "Iyo yekupedzisira ichave yekutanga", iyo yekutendeuka kurongeka kweinotevera inogadziriswa muchikamu chekupedzisira.
Pamusoro pezvo, kune akajairwa uye akavanzika mapurojekiti kana mamishini anogona kupedzwa. Mutambo unopera kana munhu angoisa pasi yavo yekupedzisira. Pane zvino mapoinzi emisheni yemunhu uye zvinoenderana nenzvimbo yechiratidzo chehuwandu.
Mutambo uyu wakakodzera 2-4 vatambi vane makore gumi zvichikwira uye unotora anenge 10-60 maminetsi.
Zvimwe zvitsva zvinotungamira kuJapan neSweden
In Gasha vatambi vanounganidza matoyi madiki kubva kumashini egasha. Michina iyi ndeyekunamata muJapan. MuGermany vanozivikanwa semichina yokutsenga chingamu. Vatambi 2-6, vane makore 7 zvichikwira, sarudza kadhi kubva kune imwe yezviso-pasi stacks. Kumashure kwemakadhi nguva dzose kunoratidza kuti ndeapi matoyi anogona kuiswa. Asi hauzivi chaizvo kuti ndeipi ichadhonzwa. Kana seti yekufananidza yapera, matoyi anogona kuchinjaniswa nemakadhi emibayiro. Kana iwe ukabatanidza makadhi emubairo, kune mabhonasi mataira anobatsira mukati memutambo kana kuunza mamwe mapoinzi. Mutambo Gasha inotamba mukati memaminitsi makumi maviri.
Zvimwe zvitsva Fika inokoka vanhu 2 kana mutambi ari ega kuti atore kuzorora zvishoma nenzira yeSweden. Mumutambo uyu wemakadhi gumi nemasere, mutambi wega wega anomhanyisa cafe yake. Nekutamba makadhi zvine hungwaru uye nekushandisa kuratidzwa kweanopikisa, vese vanoedza kuwana mari yakawanda kupfuura mupikisi. Yakatanga kuburitswa sePrint&Play, ndeyayo Fika, iyo yava kuda kutanga kugadzirwa, ine rudo uye yakadzama mifananidzo naBeth Sobel (kusanganisira Wingbeat, Viticulture, Cascadia).
ne citrus mumwe zita muObsthain akatevedzana ari pamusha wakatambanudzwa. Kutevera tsika yenhevedzano, uyu mutambo wakachena wega. Makadhi emutambo gumi nemasere ane maranjisi, ndimu uye miti yeraimu uye yekutanga mukati citrus kucheneswa kunoitika. Idzi nzvimbo dzemahara, pamwe chete nehutsva hwezvibodzwa, dzinovhura nzira nyowani nemikana yekuvandudza goho, zvichibvumira mutambo wakasiyana-siyana uye mazano matsva achienzaniswa neOrchard. Kumashure kwemakadhi zvakare kunoratidza mabikirwo ane akasiyana zvibodzwa zvinodiwa uye zvibodzwa zvinotangwa. Izvi zvinopa imwe nzira yekukunda / kurasikirwa mamiriro mukuwedzera kune yakajairwa yakakwira mamakisi ekuvhima.
Kare Stellaris: Nemesis Kuwedzera kweConsole iri pano
Inotevera Sifu ikozvino zvakare mukutengesa kwekutengesa: Big update
Trudvang Legends inogamuchira kugadziridzwazve: mutambo "hauna kuzadzisa tarisiro"
Pikmin Bloom: Smartphone mutambo unofanirwa kuita kuti mafambiro awedzere kunaka